Maka data avy amin'ny vohikala na tranonkala ho an'ny spreadsheets sy Comma-Separated Values (CSV). Ny fitrandrahana anaty tranokala, izay antsoina matetika hoe tranokala , dia dingana iray amin'ny famoahana angona betsaka avy amin'ny tranokala.
Ahoana ny fampiasana ny tranokala Chrome
Raha tsy manana fahalalana momba ny programa ianao, dia ny rindrambaiko web dia apetraka ho anao. Vao haingana dia nampidirin'ny teknolojia iray hafa mora ampiasaina amin'ny fampiasana tranonkala. Amin'ny fampiasana Google Chrome ny fametrahana maimaim-poana any amin'ny fivarotana Google ao amin'ny Google, dia afaka manamboatra tranonkala ianao amin'izao fotoana izao. Ity ny lisitry ny fanitarana Chrome hijerena.
Ny fanakona ny rindrankajy dia iray amin'ireo fitaovana maoderin'ny Chrome navigateur izay matetika ampiasaina amin'ny fandefasana ny efijery. Ho an'ny mpandidy, ny fanasitranana ny efijery dia ny fomba fitarihana sy ny famongorana ny vaovao avy amin'ny tranonkala sy ny tranonkala. Raha toa ianao ka tsy manana fahaiza-miaina kodia, dia eritrereto ny mijery ny efijery raha toa ka mahomby ny dinganina.
Ireo data nesorina avy amin'ny vohikala mampiasa Screen Scraper Chrome plugin dia azo alefa na amin'ny tahiry JSON na CSV. Ity plugin ity dia manohana ny modely XPath sy Element Selectors. Screen Scraper dia mora sy maimaim-poana ny fampiasana fanitarana mora azo ao amin'ny tranokala Chrome ao amin'ny tranokala.
Web Scraper dia extension Google Chrome izay mamoaka ny angona avy amin'ny tranonkala mampiasa ny sitemap. Ny tahirin-tserasera avy amin'ny tranonkala mampiasa ity extension ity dia voatahiry ao anaty rakitra CSV na CouchDB.Ny pagination, afaka mampiasa tsara Web
iMacro dia mpamorona Chrome Chrome. Plugin ampiasaina amin'ny fanandramana amin'ny Internet ary ny famokarana angona angona: iMacro dia mamoaka asa atao amin'ny tranokala ampiasaina ho an'ny referans amin'ny ho avy.
Ahoana ny fampiasana Chrome Scraper
Miaraka amin'ny iMacro, afaka maka maimaim-poana ny rakitra ianao ary mahatsiaro ny solosainao logins. , Internet Explorer, ary Chrome e browser.
Tsy mora ny mahita loharanom-baovao tsara amin'ny tranonkala amin'izao fotoana izao. Ity dia rindrankajy misy rindrankajy. Data Miner dia fampitomboan'ny tranokala chrome ampiasaina amin'ny famoahana fampahalalana mahasoa avy amin'ny tranokala. Amin'ny fampiasana ity plugin ity, azonao atao ny mahazo ny angona avy amin'ny tranonkala ary mandefa ny data amin'ny takelaka Google na ny Excel.
Ny fampitomboam-baovao fanampiny Miner dia ampiasaina ihany koa mba hanakarana latabatra HTML sy fampitaovana ny vaovao amin'ny Microsoft Excel na CSV. Raha toa ianao ka manam-pahaizana amin'ny fampiasana fifantenana XPath, ity plugin ity dia plugin ho anao.